Waxaan rajaynayaa in la sii daayo ee soo socda in fursadaha parser.php waxay noqon doontaa configurable in goobaha plugin si aadan haysan aynu si ay u ogalanaya markii casriyeeyo. Kuwa jira fursado waaweyn oo!
Ma aha wax kasta oo ay noqon doontaa configurable, sida aynu ma ay doondoonaan inay qarqin user leh fursado aad u tiro badan, Waxa kale oo – at dhibcood this xajiya habkaani in dadka isticmaala badan oo horumarsan oo u badan tahay in la fahmo si fiican, waxa ay filayaan iyo markii ay ka sugayaan, oo anna ma aan dareemin waa qaan ku filan si ay qayb ka mid ah xudunta ugu muhiimsan noqday, ugu yaraan ma in muddo ah.
mahad comment inkastoo
June 24, 2011 at 8:00 at the
Waxaan mahad karo in doorasho ah waxa laga yaabaa in aan la hagaagaan ku filan in lagu daro in qaabeynta (in kastoo JEER arko xulashada habka qaabeynta in software in lagu muujiyey sida “beta” ama “tijaabo ah”, iwm. – sidaa darteed waxa jira daliil – XATAA in Transposh horeba) Sida ay u sheegay inuusan dooneynin inuu “Askar” user, iyadoo dhan ixtiraam sabab, Anigu ma iibsan muran in qaabeynta software. Dhab ahaan, Ma dhihi karo in aan helay fursado Transposh ayaa sida ay yihiin 100% cad. Taasi ma i dhibin ma. Waxaan kaliya waqti dib-u-akhrinta ilaa Waxaan fahamsanahay. Waan ogahay in ay jirto fikradda ah oo caan ah in software badan in aad u baahan tahay si ay u “waxaa sii fudud”, laakiin dabacsanaan ah shaqo tagaa gacanta-in-gacantiisa ku kakanaanta. Taasi ah ganacsiga-off fudud ee technology. processing Translation adag yahay ka muuqo. Better in ay isku dayaan si ay u maareeyaan kakanaanta iyo diyaarin / sharaxo fursadaha sida ugu wanaagsan ee aad awoodid, badan si ay u “qarin” iyaga.
saraaxad, Waxaan ahay faraxsan la fursadahaas oo haddii qof ayaa ku lug leh turjumaad si joogto ah la isticmaalayo Transposh sida aanu u yihiin, Waxaan ka heli lahaa lagama maarmaan in hawsha iyo Transposh adag tahay in ay isticmaalaan iyaga oo aan. Waa maxay sababta aan iyaga soo furo dad badan?
Aan isku dayaya in ay noqon muran halkan, laakiin “waxaa sii fudud” waa mid ka mid ah badhamada aan kulul. Sorry aad ku dhuftey! 😉
sida in aad ku darto Khariidadda bogga in mod this?
balastar Tani ma shaqeeya ii. Marka i geliyaan Khariidadda bogga-core.php iyo guji dib u dhiska Khariidadda bogga ah “XML Sitemap Generator” sheegay:
# orod ugu danbeysay ma uusan dhammayn! Waxaa laga yaabaa in aad kor u qaadi kara xasuusta ama waqtiga la xadiday ee qabnay PHP. Wax dheeri ah baro
# isticmaalka ugu danbeysay ee loo yaqaan xasuusta of script ahaa 36MB, xadka ah ee server waa 256M.
# Markii ugu danbeysay ee la garanayo ee fulinta script ahaa 133.07 seconds, xadka ah ee server waa 120 seconds.
# script joojiyay agagaarka tirada post 1716 (+/- 100)
Waxaan u soo jeedin karaa oo keliya mid ka mid kor waqtiga xadidan ee script in ama u dhaqaaqo version 4 of plugin in
mahad for this wadaago, waa laga yaabaa in interface ka wanaagsan in in qaar ka mid ah version mustaqbalka soo socda 🙂
Bharat Balegere sheegay
July 4, 2011 at 4:07 at the
Ma Transposh socon Hypercache?
Waxaan jecel isticmaalaya Hypercache badan kayd super.
Hypercache leedahay wax badan oo ka mid ah fursadaha loogu talagalay invalidating cache.But ma aqaan sida loo isticmaalo for Transposh.
Weligay tijaabiyey this, laakiin waxaan u maleynayaa in waxa laga yaabaa, la'aanta ah ee wax kama jiraan ka dhigi laga yaabaa in arrimaha reposting qaar ka mid ah turjumaad, laakiin waxa ay tijaabiso, aad masaafada kala duwan yihiin
Little Red rihii sheegay
July 11, 2011 at 11:45 at the
Waxaan Jecelahay 2 su'aalo…
1) Waxaan jeclaan lahaa in mararka qaarkood qori posts aan Ingiriisi, ka dibna u turjum Faransiis, iyo mararka qaarkood in Faransiis iyo MARKAA af ingiriisi u turjum. Waxaa suurto gal ah iyo sida?
2) Waxaan jeclaan lahaa in uu noqdo mid ka mid ah oo kaliya si ay u awoodaan in ay u turjumaan posts iyo jeclaan lahaa ikhtiyaarka aan u muuqdaan bogagga internetka. halkan mar kale, waxaa suurto gal ah, iyo sida?
Thanks in horay!!
1. Waxaad u baahan tahay in ay isticmaalaan Meta ee tp_language in posts aad
2. Just dhigay fasax turjumaad in admin, waxay ka muuqan doontaa on pages online aad, laakiin ma aha dadka isticmaala aad
July 14, 2011 at 10:15 at the
Waxaan marar badan ku weydiiyey, laakiin ma uusan helin jawaabahoodii. xitaa, aad saaro comments oo dhan my.
Waxaan ku rakibtay plugin ah, config iyo dar widget si guul leh. Si kastaba ha ahaatee, marka i guji si aad luqad gaar ah, waxa ay leedahay baadi:
“Error Deji Content
page waxaa aad isku dayaya in ay u aragto in aan la arki karo, maxaa yeelay, waxay isticmaashaa hab khaldan ama aqlka of riixo.”
Waxaad ka arki kartaa my site, iyo fadlan ii soo sheeg si aad xal.
July 19, 2011 at 2:09 at the
Waxaan isku dayay in ay kuu soo diri jeer aad u badan, fadlan qor cinwaanka ka shaqeeya email in comments haddii aad rabto in aad hesho jawaabaha waqti ka waqti, Waxa kale oo aan ku talin lahaa in aad hubisid content folder spam waqti ka waqti, haddii aad sugaysid in wax muhiimad, si kasta ha ahaatee – aad oo kaliya a reply heshay halkan, gzip arrinta, u badan tahay in la meel dhibaato on your site ama plugin ah khilaafsan
Aniga ahaan waxa ay ahayd dhibaato la plugin ah “riixo gzip”. Isku day in aad u gab si ay u arkaan haddii ay furfuraya dhibaatada
Waad ku mahadsan tahay Transposh iyo Ilyo ee jawaabaha!
Anigu garan maayo marka i awood u riixo gzip, waxaa laga yaabaa in ay tahay qayb ka mid ah kayd super Conciliation ama kayd total 3 ? Iyo hada, sidee baan u gab karaa? Fadlan caawin!
Su'aal kale, Waxa kale oo aan lagu rakibay plugin this site in kale, Waxa uu ahaa wanaag ka hor. Si kastaba ha ahaatee, shalay, waxa uu u muuqday bogga maran marka i guji si aad luqad gaar ah. Sidaas waa maxay dhibaatadu?
Fadlan iga caawin! Ku mahadsan tahay oo dhan guys aad u badan!
July 28, 2011 at 10:38 at the
ma run ahaantii wax badan ayaa kaa caawin kara oo la xiriira gzip ah, tani waxay leedahay wax la sameeyo iyada oo qaabeynta ah khilaafsan oo aynu aanay ka warqabin.
The bogagga maran tahay in la xalliyo iyadoo la kordhinayo xadka xasuusta php ah.
July 28, 2011 at 9:50 at the
Goorma ayaan u heli update ee 3.2.1?
Waxaan jeclahay in aad Translation-plugin oo jeclaan lahaa in aan ku rakibi aan WP-Version cusub
July 28, 2011 at 10:32 at the
Well, waxaa la shaqeeyaa 3.2.1. Boggan waxaa socda 3.2.1, u maleynayaa in aan beddeli doonaa readme.txt ugu dhakhsaha badan ku filan.
OK… maydhan biyaha.. la theme (Mondeo – ka aboodiga-theme) waxaa necayb shaqeeyaan .Kaliya backend ah in si joogto ah turjumi doono, laakiin frontend waxaa necayb shaqeeyaan 🙁
OK, oo dhan dib… hadda waxaan u helay.
Waxaan jeclahay in aad plugin !!!
Sorry jagada double…
Faraxsanahay in aan maqlo wax walba waa uu fiican yahay hadda